आइतवार, माघ ९, २०७८ ०१:४९:४३ युनिकोड
रसुवा जिल्लामा कहिले प्रबेश गर्नु भयो ?
 रसुवा जिल्लामा हुने गरेका घटनाको समाचारको रूपमा पत्रपत्रिकामा आउने कार्यको शुन्यता देखी अन्तर्मनदेखि नै पत्रकारिता गरि यहाँको पुण्यभूमीमा सेवा गर्ने अठोटले यसमा लागेको हँु । म त्येतिखेर जागिरे जिन्दगमिा भएपनि हिमाली जिल्ला रसुवाको गतिविधि अन्य जिल्लामा वा संचार माध्यममा पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्थ्यो तर राजपत्र अंकित द्धितिय श्रेणीको खरिदार पदमा रहेको र निजामति ऐनले खरिदार स्तरको कर्मचारीलाई सरकारको स्वीकृतिविना अन्य पेशामा आवद्ध हुन मिल्दैन भनिएको थियो ।
वन कार्यलयको बृक्षारोपणको समाचार पहिलो पटक ०४२ मा संप्रेषण भएको हो । थोर बहुत समाचार आइरहन्थे । त्येतिखेर आकाशवाणी मार्फत अपरेटरको सहायताले दुर सञ्चारबाट समाचार टिपाउनु पथ्र्यो । शुल्क चर्को थियो , प्रति अक्षर पाँच पैसा तिर्नुपथ्र्यो तर मैले पत्रकारिताको पिनकोड प्राप्त गरेकोले प्रतिअक्षर दुई पैसामात्र तिरे पुग्थ्यो । दुर सञ्चारको हाकिम प्रायशः काठमाडौं बस्ने भएकोले म अपरेटर तालिमप्राप्त भएकोले प्रायशः रसुवाको दुर संचार नै मेरो जिम्मामा हुन्थ्यो ।
म नुवाकोट जिल्लामा जन्मिए पनि प्राय बाल्य अवस्थादेखि नै रसुवाकके भूमिमा नै दिन बित्दथ्यो । यहाँका बुढापाकामा सञ्चार र पत्रकारिताको त्यति महत्व थिएन । राष्ट्रसेवकले राम्रो काम गरेको समाचार आएपछि पुरस्कार पनि पाउँथे । विकास निर्माणको सूचना दिइरहन्थे । ०४६ को बहुदल व्यवस्था भएपछि थुप्रै पत्रपत्रिका निस्के तर मैले राससमा नै रहेर सेवा गरिरहेँ ।
०४२ देखि ०५४ सम्म सहयोगी जिल्ला समाचारदाताको रूपमा कार्य गरेँ । ०५५ मा खरिदार पदको अन्त्य गरि पूर्ण पत्रकारिताको बिल्ला लगाउन संचार संस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहीरहेँ । साह्रै गर्व लाग्छ, मैले लेखेका समाचारले राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थान पाएको छ । चिया कति पीईयो ? भन्ने प्रश्न जस्तै समाचार कति लेखियो भन्दा हिशाव राख्न सकिएको छैन । २५ वर्षको दौरानमा धेरै समाचार लेखिए । धुन्चे गोसाइँकुण्ड केबलकारको समाचार मैले नै लेखेको थिएँ, त्यही समाचारबाट चर्चामा आएको कुरा अहिले राष्ट्रिय स्तरको योजनाको रूपमा रहेको छ, मलाई यो साह्रै गर्व लाग्छ ।
रसुवाको पत्रकारिताको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?
 वि.सं २०४६ को परिवर्तन सँगसँगै पत्रकारिता र सूचना प्रवाहमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो । पत्रपत्रिकाको महत्व बढ्दै गयो । क्रमिक रूपमा रसुवाको शैक्षिक अवस्था पनि सुधार हुँदै गएपछि युवापिढीका पत्रकार थपिन थाले । विद्यालयस्तरबाटै पत्रकारिताको पढाई हुन थाल्यो । घटनाहरू पनि गाउँगाउँमा बढ्दै गयो । त्यसका समाचार छापिएपछि गल्ती गर्नेको नाम जोडिएमा धम्क्याउने पनि गर्थे ।
अझ युद्धकालिन अवस्थामा बढी डर थियो । धेरैजसो व्यक्तिले मेरो नाम आएन भनेर रिसाउँथे र पत्रकार सत्रकार उडाई दिन्छौं भनेर युवाहरू आक्रोश पोख्थे । तर म सबैको ज्ञानु दाई भएकोले नजिक परेर कुरा गर्दा कुरा बुझेर ठण्डा दिमागले फर्कन्थे । कोही भन्छन् समाचार किन आएन ? कोही भन्छन् हाम्रा भावना समेटिएन त कोही भन्छन् तथ्य घटना बाहिर आएन, त कोहीले कार्यक्रममा आएन । तर पत्रकारको आँखाले औल्याएको यथार्थमा आधारित भूल राज्यको निकायबाट छानबिन हुँदैन, यही छ बिडम्बना ।
पत्रकारिता पेशा व्यवसायिक हुन नसक्नाको कारण के होला ?
 पहिला पहिला पत्रकारको संख्या नै उत्पादन भएको थिएन । पहिले शिक्षाको पहुँच १२ % थियो तर अहिले ६० % भन्दा बढी भइसक्यो । पत्रकारहरू पनि बढेका छन् । तर व्यवसायिक हुन सकेको छैन । पत्रकारिता पेशा व्यवसायिक हुने लक्षण भने रसुवामा देखिएको छ । स्थानीय पत्रपत्रिका लगायत सञ्चार गृहको अभाव नै पत्रकारिता पेशा व्यवसायिक हुन नसक्नु हो ।
 राजधानीबाट नजिकैको दूरीमा रहेर पनि विभिन्न विकासका दृष्टिकोणबाट रसुवा पछाडी नै छ । पत्रकारिताको विकास विना यो सम्भव पनि छैन । रसुवा जिल्ला धार्मिक, पर्यटकीय, भौगोलिक हावापानी, जलसम्पदा, ऐतिहासिक हिशावले धनी भएकोले पत्रकारिता पेशाको व्यवसायिक हुने सम्भावना धेरै छ ।
समग्र विषयवस्तुको खबरदारी गर्न पत्रकारिताको खाँचो पर्दछ । समाचारको माध्यमबाट बालबालिकाको मनोबल उच्च पार्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचना प्रवाह गर्ने, विकासे पत्रकारिता गर्ने, विभिन्न स्थानमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न सहयोग पुग्ने खालका सूचना संप्रेषण, पर्यटकीय विकास, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि पत्रकारिता गर्नुपर्छ । व्यवसायिक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अगाडी बढ्न सके यहाँ धेरै पत्रपत्रिकाले स्थान पाउन सक्छ । पर्यटकीय हिशाबले तेस्रो स्थानमा रहेकोले पनि यहाँ पत्रकारिता लगायतका पेशाको प्रवल सम्भावना रहेको छ । पत्रकारिता पेशा र पत्रकारको भविष्य उज्वल र सुनिश्चित छ ।
असल पत्रकारमा कुन् कुन् गुण हुनु पर्छ ?
रसुवा खबर, वर्ष १, अंक १ असोज १६ २०६७ शनिवार
प्रकाशित मिति: बुधवार, चैत्र २०, २०७५, १२:०४:००